TRF na Television - Relọ Akwụghachi --gwọ - Lovehụnanya, Mmekọahụ na ịntanetị
Home TRF na Television
Kemgbe etiti 2016 onye isi oche nke The Reward Foundation, Mary Sharpe, na-eme ihe ngosi na telivishọn. Lee ụfọdụ n'ime ha.
Itoolu na BBC Scotland
Ndi Reward Foundation nwere obi uto na ohere nke ikwurita oru ya mgbe akporo Mary Sharpe na Nine nke BBC Scotland TV. Ihe a mere na Thursday 5th Disemba 2019 bu ihe banyere ịrị elu nke ihe nmekorita nke nwanyi na njikọ ya na ihe nlere. Ewelitere okwu banyere iwu nyocha oge gbagoro na Mary mezie ihe ndị na-ezighi ezi banyere mgbasa ozi na BBC na ụlọ ọrụ mgbasa ozi. Ntinye iwu iwu nyocha afọ dị na Akụkụ 3 nke Digital Economy Act 2017 ga-abụrịrị n’afọ a, mana ahapụla ya, ahapụghị ya. N’ezie, onye minista Gọọmentị UK tinyere aka na nkwenye edewo na a ga-ejikọ ya na Online Harms Bill, yabụ na ịnweta foto ndị gba ọtọ site na weebụsaịtị azụmahịa na nyiwe mgbasa ozi ọhaneze ga-ejedebe n’aka ndị mmadụ karịa 18.
Akụkụ ahụ malitere site na onye nta akụkọ Nine nke Fiona Stalker na-ajụ ajụjụ ahụ Ọ bụ ime ihe ike na-achọghị n'oge mmekọahụ 'bụ ihe a na-ahụkarị'? Ọ na-abịa mgbe ọtụtụ ikpe ndị omekome dị elu na-anụkarị ihe nchebe nke 'mmekọahụ siri ike na-ezighi ezi'. Nnyocha e mere na nso nso a na-egosikwa na ọnụ ọgụgụ ụmụ agbọghọ na-arị elu nke na-eme ihe ike achọghị. Ọ dị oke nfe ịta ụta maka ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ?
Ndị ọbịa Studio Rebecca Curran na Martin Geissler wee jụọ Mary Sharpe, Onye isi oche nke Reward Foundation na onye nta akụkọ Jenny Constable, iji nyochaa okwu a siri ike. Vidio ahụ dị na akụkụ abụọ.
Obodo Scottish Gaelic hụrụ mmemme mbụ ya raara nye nsonye nke ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na ikuku nke ya dịka akụkụ nke usoro An Sgrudaire (Onye Nchọpụta) gosipụtara na 21 March 2019.
Ruairidh Alastair laghachiri n'ajụjụ ndị ọzọ banyere nsogbu ndị metụtara ndụ nke ndị na-eto eto, ọ na-achọkwa azịza site na nkwurịta okwu na ndị ọkachamara, na-ege ndị na-egwu anyị ntị ma na-eme nnyocha site na iji ekwentị mkpanaka ya na wits ya.
N'ime ihe omume a, ọ na-enyocha ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na nsogbu ọ nwere ike ịkpata, n'oge ọ dị mfe ịnweta porn adịghị mfe site na njikọ ịntanetị dị elu na ekwentị mkpanaaka. Ihe ewepụtara bụ mkparịta ụka Ruairidh na Mary Sharpe sitere na fromgwọ Ọrụ .gwọ.
Mary Sharpe laghachiri telivishọn Ndụ Nolan na BBC Northern Ireland na 7th March 2018. Ọ na-arụrịta ụka banyere mmetụta nke ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na ahụike na uche nke ụmụaka na onye ọbịa bụ Stephen Nolan na onye na-agba egwu egwu na onye na-agbake agụụ mmekọahụ.
Mary Sharpe pụtara na Nolan Live na BBC Northern Ireland na 19th October 2016. Ọ na-arụrịta ụka banyere ihe ọ ga-akụziri ụmụaka dị ka afọ 10 na onye ọbịa bụ Stephen Nolan na onye na-ede akwụkwọ akụkọ London bụ Carol Malone. Vidio ahụ dị n'akụkụ abụọ, nke ọ bụla gbasara 6 nkeji 40 sekọnd.